चितुवा आक्रमणबाट ज्यान गुमाएकी तनहुँ निवासी पुष्पाको परिवारलाई राहत प्रदान – Samacharpati Samacharpati चितुवा आक्रमणबाट ज्यान गुमाएकी तनहुँ निवासी पुष्पाको परिवारलाई राहत प्रदान – Samacharpati
दमौली, २७ जेठ । चितुवाको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएकी तनहुँको भानु नगरपालिका–२ भकुण्डथोक निवासी नौ वर्षीया पुष्पा अधिकारीको परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले तत्कालका लागि रु ५० हजार राहत प्रदान गरेको हो । उक्त रकम मृतककी आमा दुर्गा अधिकारीलाई प्रदान गरिएको डिभिजन वन कार्यालय तनहुँका प्रमुख केदार बरालले जानकारी दिनुभयो । बरालका अनुसार थप राहतका लागि प्रक्रियाअनुसार जाँदा केही समय लाग्नेछ ।
आफ्नै घरको आँगनमा खेलिरहेको अवस्थामा चितुवाको आक्रमणबाट बालिकाको शुक्रबार राति मृत्यु भएको थियो । बालिकालाई आक्रमण गर्ने चितुवा नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र वन रक्षकसहितको ३० जनाको टोली खटिएको छ । बरालले भन्नुभयो, “उक्त टोलीले बेलुकाको समयमा चितुवाको खोजीकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । चितुवा नियन्त्रणमा लिन सक्दो प्रयास गर्नेछौँ ।”
नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चितुवाको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएकी बालिकाको परिवारलाई समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ । आइतबार मृतकको घरमा पुगी वरिष्ठ नेता पौडेलले मृत बालिकाप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दैै परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्नुभएको हो । सो अवसरमा पौडेलले बालिकालाई आक्रमण गर्ने चितुवा नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइसकेको बताउनुभयो ।(रासस)
आन्तरिक उडान कहिले खुल्छ ! बामदेव गौतम हुन्छन् त अर्थमन्त्री ! हेर्नुहोस आज भदौ १९ गतेका मुख्य समाचारहरु